Inona no nitranga tamin'ny tsingerintaona nahaterahanao? | Martech Zone
Alahady 25 Febroary 2007 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Nisy fotoana nahakivy ahy rehefa ho avy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako. Inona no nitranga tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako? 19 aprily dia nisy fisehoan-javatra tena mahaliana nitranga teo aminy… ny fipoahan'ny USS Iowa, tanàna Wako, Oklahoma… ugh. Raha miverina amin'ny tantara dia tsy nihatsara kokoa. Andro nanombohan'ny Revolisiona Amerikanina!
Wikipedia dia misy fidirana iray isan'andro isan'andro amin'ny taona azonao vakiana. Te hanampy aho fa ny andro nahaterahako, saingy tsy azoko antoka fa tena tantara izany. 😉
25 Mey 2007 tamin'ny 4:36 hariva
Oad… miala tsiny fa tsy niasa tamin'ny IE izy io (Mpijery mahatsiravina tokoa io). Namboariko fotsiny!
26 Mey 2007 tamin'ny 3:38 hariva
Amin'ny lafiny iray hafa dia mizara fitsingerenan'ny andro nahaterahana amin'i Christopher Lee sy Vincent Price aho, ary Lou Gossett Jr. (27 Mey) Fitaovana fikarohana mahafinaritra, Doug.
26 Mey 2007 tamin'ny 5:50 hariva
Mety ho mora kokoa izany raha tsy hoe tsy namboarin'ny IE7 ny sanda amin'ny singa voafantina. Ka ny takelaka dia naka indroa tao amin'ny efitrano ho an'izany.
Telo mahafinaritra izany hizarana tsingerintaona nahaterahana!
26 Mey 2007 tamin'ny 3:46 hariva
Cool - Mizara ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako miaraka amin'ny ambany noho i Cameron Diaz 🙂
(Ary, eny, IE is mahatsiravina. Niasa efa ho herinandro aho tamina firafitra bilaogy tena mahafinaritra, mba hahalalako fa na dia mifanaraka amin'ny XML aza izany dia tsy namoaka tsara tamin'ny IE.)
26 Mey 2007 tamin'ny 5:51 hariva
Cameron Diaz dia toa iray amin'ireo kintana izay manana ny lohany mahitsy eo an-tsorony. Ary mafana izy! 🙂
ECards fitsingerenan'ny andro nahaterahana
May 12, 2007 ao amin'ny 4: 35 PM
ny bday amiko dia amin'ny 21 jona ary izao no lazain'i wikipedia:
"Ity andro ity matetika dia manamarika ny solstice amin'ny fahavaratra any amin'ny hemisphere avaratra ary ny solstice amin'ny ririnina any amin'ny hemisphere atsimo, ary toy izany koa ny andro amin'ny taona misy ny ora lava indrindra amin'ny hazavan'ny faritra avaratra ary ny fohy indrindra amin'ny hemisphere atsimo."